ပုံတွေအများကြီးတင်ပြီးရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘာမှမသိသေးလို့ပါ
က ကိုယ်ပိုင်အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်သွားတာမို ့..ကြည့်ချင်သူတွေ အဲဒီမှာ သွားကြည့်ဖို့ လင်ခ့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
မန္တလေးဂေဇက်ကို အကြံပေးချင်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပထမတခုက “အခုလက်ရှိ ဂေဇက်ကို လူပေါင်းဘယ်နှစ်ယောက်နှင့် အသင်းဝင် ဘယ်နှစ်ဦး ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနေသည်။” ဆိုတာလေး ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ထည့်ပေးထားရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဂေဇက်မှာ မန်ဘာတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ပရိသတ် ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာ အလွယ်တကူသိနိုင်တာပေါ့။
နောက်တခုက စာဖတ်သူတွေဆီက Vote ယူတဲ့ စနစ်ပေါ့။ ဥပမာ – ၂၀၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တိုင်းပြည်ကို တစုံတခု ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ထင်သလား။ မထင်ဘူးလား။ စသဖြင့် Eleven Media Group ဆိုဒ်မှာ လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးပေါ့။ ဒါဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ သဘောထားတွေကို စစ်တမ်းတရပ်သဖွယ် ကောက်ယူပြီးသား ဖြစ်သွားမှာမို့ သိပ်ကို အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
အကြံကောင်းမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြောကြည့်၊တိုင်ပင်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျား။
မြန်မာပြည်က ဝင်သူတွေ အရမ်းလေးပင်နေမှာ စိုးလို့ပါ။
အဲဒါ အရင်တလောက လုပ်ထားတာ တွေ့လိုက်မိပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ပျောက်သွားတာပါခင်ဗျား။
ကျနော်ညီလေးတို့အတွက်ရေးပေးနေတဲ့ (နားစည်ကိုထွင်း ဆောင်းပါး)ကိုညီလေးပြောတဲ့ (သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတိတ်စိမ်း)အတွက်
နောက်ပြီး ညီလေးတို့ဆီမှာ အသုံးပြုပြီရင် နောက်ထပ် ဂျာနယ်သို့မဟုတ်တစ်နေရာရာကို ပို့ခွင့်ရှိမရှိလဲသိချင်ပါတယ်။
editor(at)myanmargazette.net ကို တိုက်ရိုက်ပို့စေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးရင် အကြောင်းကြားပါ့မယ်။ အဲဒီနောက်… ပြည်တွင်းက ဘယ်နေရာမှာမဆို ကိုပေါက်ဆန္ဒရှိရင် ဆက်သုံးလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့ မန္တလေးဂေဇက်မှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဆိုတာကို မှတ်ချက်နဲ့ ရေးပေးစေလိုပါတယ်။ ကြာရင် ဟိုကကူး၊ဒီကကူးနဲ့ ဘယ်ကဘယ်လို ဘယ်ကစာမှန်း မသိကြမှာမို့ပါ။
ဒီဆိုဒ်ကို သတင်းစာတိုက်က ကျွန်တော့်ညီတစ်ယောက်ပေးလို့ သိခဲ့ရတာပါ။
ကျွန်တော် အင်မတန် အသိနောက်ကျခဲ့ရတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အခုလို ကရိကထများတဲ့အမှုကို ကမကထနဲ့ စီစဉ်ပေးတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း အလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ထပ်တိုးတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်း တော်တော်ကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင်။ အနုပညာ အတတ်ပညာရှင်များ ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပြီလို့ မနော မြင်ယောင်နေမိပါတော့တယ်။
ပြောစရာလေးတခု တွေ့လို့ ပြောပါရစေ အယ်ဒီတာခင်ဗျား။ အတို့အထောင် လုပ်တယ်လို့လည်း မထင်စေချင်ပါ။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့က ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာ ပြည်ပမီဒီယာက ကူးတင်တာကို ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ ပါရှိပေမယ့် ယနေ့တိုင် ပြည်ပမီဒီယာက သတင်းတွေ တွေ့နေရပါသေးတယ်။ စည်းကမ်းကို တိတိကျကျလေး အကောင်အထည် ဖော်စေချင်ပါတယ်။ မန္တလေး ဂေဇက် အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ပါစေ။
website ကို Hacking အလုပ်မခံရအောင် security ကိုတိုးမြင့်ပေးပါ……….
member များ user name နဲ့ password ကို security တိုးမြင့်ပေးပါ………..
ဇူလိုင်(၁၉)ရက်နေ့ အမှတ်ပေးစနစ်အရ ရှင်းပြထားတာတွေကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုပဲ မရှင်းတာလေး သိချင်ပါတယ်။ စာတစ်ပုဒ်အတွက် ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်တွေ (၂၀ဝ ၊ ၅၀၀) တွေဟာ စာတစ်ပုဒ်မှာ စာလုံးရေ(၃၀၀၀)အနည်းဆုံးရှိမှ ပေးမှာလား။ မပြည့်ရင်ရော အမှတ်ပေးမှာလား။ အဲဒါလေး မရှင်းလို့။ စာလုံးရေ(၃၀၀၀)ပြည့်ဖို့က မလွယ်ဘူးလေ။ တော်တော်ရှည်ရှည်ရေးမှပြည့်မှာ။ အဲဒါကြောင့် မေးကြည့်တာနော်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ နှီးနွယ်တဲ့ ပို့စ်တွေတင်ထားတယ် (အမှန်အကန်သတင်း) ဆိုပါစို့
ဘာ့ကြောင့် အခြားပို့စ်တွေက မြန်မြန်ဝင်လာတာလဲ
တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို မမြင်စေလို လို့လား
ဟုတ်မှာပေါ့။ တော်ကြာ မြန်မာပြည်က ဘန်းလိုက်မှ အကုန်ကျော်ခွနေရမယ်ဖြစ်လို့ တချို ့မန်ဘာတွေ တာဝန်သိသိလုပ်နေပေးတာဖြစ်မှာပေါ့။
စာလုုံးရေ ၃၀၀ဝ ပြည့်မှ ပေးမယ်ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းများ များနေသလားလို့ပါ.. ဥပမာ short story တွေဟာ စလုံးရေ ၃၀၀ဝ ပြည့်အောင်ရေးရင် ဘယ်လို့မှ အနှစ်သာရ ရှိရှိ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…
ကြည့်ရတာ ၂၀၀ဝ ကိုလျှော့ပေးရမယ်နဲ့တူတယ်..။ မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်။
တကယ် ကိုယ်ပိုင်စာတွေရေးကြမယ်ဆို (မကူးတင်ကြဘူးဆို)၂၀၀ဝ လျှော့ပေးဖို့ ထောက်ခံပါတယ်။
ပြီးတော့နောက်တခုက ပွိူင့်ဘယ်လောက်ရတာလဲ ပြပေးတာတော့ကြိုက်ပါတတယ်.. ဒါပေမဲ့ ပိုစ်ကနေ ဘယ်လောက်ရပြီ… comment ကနေဘယ်လောက်ရပြီ.. total ဘယ်လောက်ရပြီဆိုတာမျိုးလေး ပြပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့ဗျာ…
မျက်စိများ မှောက်နေသလား..။ အဲဒီအောက်နားလေးတင် (သင်?ပွိုင့်ရပြီလဲ…) ရေးထားတယ်လေ။ ကလစ်လေးဘာလေးလုပ်ကြည့်ပါဦး..။
စာမူက အနည်းဆုံး စာလုံးရေ သုံးထောင်ရှိရမယ်လို့ ရေးထားတယ်။ ဒါဆိုရင် အရင်ရေးထားတဲ့ စာမူတွေကို နူတ်မဲ့အစား နောက်ထပ်မတင်အောင် လုပ်ပေးပါလား။
ပြီးတော့ အထူး member ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာပါလဲ?
အရင်ရေးထားတဲ့စာမူတွေ နှုတ်ထားပုံမရပါဘူး။ အဲဒါသာနှုတ်မယ်ဆို ပိုစ့်တောင် သိပ်ကျန်မယ်မထင်ဘူး။
အထူးမန်ဘာက အယ်ဒီတာအဖွဲ ့က တောင်းဆိုရွေးချယ်ထားတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က contributor တွေဖြစ်ပြီး မတူတဲ့မန်င်ဘာအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အထူးမင်ဘာဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ဗွီအိုင်ပီပေါ့ဗျာ။ တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ အမျိုးတွေပါတယ်လို ့ကြားပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားနေသူကို တိုက်ရိုက်မေးရင် ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ သူတောင်တပ်ချုပ်ကြီးနဲ့ တခုခုတော်စပ်သလားမသိ။ ၂၀၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သွားဝင်ပြိုင်မယ်လို့လည်းကြားပါတယ်။
member အဖြစ်ကနေ နုတ်ထွက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ Admin ခင်ဗျာ။
Send email to Admin when you decided to leave the website. Points rollback is not possible. Please double think before leave.
Comment တစ်ခုကို 10 Point ပဲ ပေးတော့မယ် ဆိုတော့၊ Comment ပေးတဲ့သူတွေကို သိတ်အလေး မထားသလိုများဖြစ်နေမလားလို့ပါ။
ဒီမှာ ဒီနေ့အထိ မန်ဘာ ၁၇၀ဝကျော်ရှိနေပါတယ်။ နာရီနဲ့အမျှ မန်ဘာအသစ်တွေတိုးနေတာပါ။
အဲဒီထဲက နေ့စဉ်ရေးနေတဲ့ ကောမန့်တွေ၊ ပို့စ်တွေကြောင့်ကုန်ကျစရိပ်ထည့်တွက်ရလို့ပါ။ မန်ဘာတယောက် တရက်မှာကောမန့်တခုရေးတာနဲ့ သူ့အတွက် ပွိုင့် ၅၀(၄၀+၁၀) ရနေပါတယ်။ ဆိုတော့ မန်ဘာ ၁၇၀ဝ သာတရက်ထဲကော်မန့်တခုစီသာရေးလိုက်ရင် မန္တလေးဂေဇက်လည်း ဒေဝါလီခံပေတော့ပါပဲ..။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ အသုံးစားရိတ်က တော်တော်လေးများလာတာမို ့အကုန်လုံးပြန်ညှိနေရတယ်ဆိုပါတော့။ ဆာဗာကို ပြောင်းဖို့ကလည်း တလ ရာချီကုန်မဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။
ကောမန့်ပေးတဲ့သူက ပို့စ်တင်တဲ့သူ အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ပို့စ်တင်သူ(စာမူ)ကို နှစ်စဉ် Award တခုခုပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာမှာ အဲဒီကောမန့်အရေအတွက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လည်း မှန်းထားပါတယ်။ ဒီတော့ ပို့စ်တင်သူတွေဟာ ကိုယ့်ကို ကောမန့်ပေးလာတဲ့သူတွေကို အလေးထားမှာပါ။
အဆင်ပြေသလိုသာ လုပ် ပွိုင့်ရလည်း ကိစ္စမရှိဘူး မရလည်း ကိစ္စမရှိဘူး ၁သိန်းပြည့်အောင် ရေးဖို့လည်း မလွယ်ဘူး ၁သိန်းမပြည့်ရင်လည်း ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ရတာ မရတာတော့ သိပ်မစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး ကွန်မန့်လေးတွေ ပေးပြီး စိတ်ထဲက ခံစားချက်တွေ ပြောရတာကို နှစ်သက်ပါသည်။ ဒါနဲ့ ဒီမှာ ဖော်ဝပ်မေးကရတဲ့ အသံဖိုင်လေး တခု တင်ချင်လို့ အဲဒါ ဘယ်လိုတင်မလဲဟင် တင်လို့တော့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်
တခြား site ကစာတွေ သတင်းတွေကိုလဲဒီမှာပြန်တွေ ့နေရနော် !!!!
ကျနော်လဲ နောက်ဆို ကိုယ်တိုင်သတင်းရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်……………………
အရင်က မန္တလေး ဂေဇက်သတင်းစာကို ပီဒီအက်ဖ် ဖိုင်အနေနဲ့ တင်ထားတာ တွေ့မိပါတယ်. အခု ၂၀၁ဝ ကစပြီး မတွေ့တော့ပါ။ မဖတ်ရသည်မှာ နှစ်စကထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မှာတင်ထားလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဆိုက်ဒ်လေးအောက် ပြောင်းသွာတာ ဒီနေ့သတိထားမိပါတယ်။ အဟောင်းလောက် အဆင်မပြေပါ။ အရင်ဟာက ကိုယ့်မှာ ပွိုင့်ဘယ်လောက်တက်နေ သလဲဆိုတာ ချက်ချင်းမြင်ရတယ်။ (ပြည်ပနေသူများ အတွက် ငွေသားထုတ်ခွင့်မရှိဆိုတာ သိပေမဲ့ သိချင်လို့ပါ။)
ပြီးတော့ကိုယ်ပို့စ်ကို ဘယ်နှစ်ယောက် ဖတ်ထားလဲဆိုတာလည်း တန်းတွေ့ရတယ်။ အခုတော့ သိချင်ရင် ကိုယ်ရေးထားတာကို ဝင်ကြည့်မှ သိရမဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။
မန်းလေးတျု့ပ်မှာ အသံဖိုင်တခုတင်ချင်လို့် မန်းဂေဇက်က နာမယ်အတိုင်း အကောင့် အသစ်ဖွင့်လိုက်တာ အခုထိ အီးမေးလ် မရသေးပါခင်ဗျား၊ ဖြစ်နိုင်ရင် တချက်လောက် ကြည့်ပေးစေလိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လေးအောက်မပြောင်းခင်က မိုဇီလာ ဖိုင်းယားဖောက် နဲ့တက်ရတာ အရမ်းအဆင် ပြေပါတယ်။ အခုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲမသိ တချို့စာလုံးတွေက ဖတ်လို့မရလို့ အိုင်အီးသုံတာ စာရိုက်ရင် ဆတ်တောက်ဆတ်တောက်နဲ့ အဆင်မပြေပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ သိရင်ပြောပြပေးပါလား။
ပြန်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျ။ တခြားမင်ဘာတွေလည်း အဆင်မပြေတာတွေ ရေးကြပါဦး။
ဒီနေ့ ပုံစံပြောင်းသွားတာ အမြင်လည်း တော်တော် ဆန်းသွားတယ် အရင်ကထက်ပိုသဘောကျတာကတော့ ယူဇာပုံဘဲ အရင်ပုံထက် အခုပုံက ပိုကြည့်ကောင်းလာတယ်။ ကျန်တာကတော့ လိုအပ်တာ ရှိရင် ထပ်ပြီး ကြောင်းကြားပေးမယ် တခြား ဆိုက်တွေလို ဘယ်သူအွန်လိုင်းမှာ ရှိလဲဆိုတာပါ သိနိုင်နေပြီဆိုတော့ ကောင်းပါတယ် ဒါနဲ့ ဒီမှာကော မန်ဘာဝင်တွေရဲ့ လိပ်စာတွေ စိတ်ချရမှုကကော ဘယ်လိုလဲဟင် အဲဒါလေးတော့ သိချင်တယ်
ကျနော် နာမည် ရန်နိုင်သူပါ
ကိုယ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိနေတာ ဖျောက်ထားချင်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ၊
good တယ်ဗျို ့
ဖိုရမ်မှာ တော့ပစ် တင်တာ မြန်မာ စာမပေါ်ဘူးနော် အဲဒါလေး ဝင်ပြောတာပါ
ဖတ်သူဘယ်နှစ်ဦး ရှိပြီလဲဆိုတာ မှတ်ချက်ပေးသူ အရေအတွက်လို တင်လို့မရဘူးလား။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ သတင်းစာ ကို ဒေါင်းမရပါ။ content decoding has failed လို့ ဝင်းဒိုးတခုပေါ်လာပါတယ်။
မန ္တလေးတျုမှာ အသံဖိုင်တင်ဖို့ မင်ဘာဝင်ထားတာ အခုထိ အီးမေးလ် မရသေးပါ။ ဆရာဆီကို ပို့ပေးလို့တင်ပေးနိုင်ရင် မေးလ်လိပ်စာကလေး သိပါရစေ။
ဆရာက ဆရာပါ ဆရာရယ် ဆရာလောက် ဆရာတဲ့သူတောင် ဆရာလို မဆရာပါဘူး ဆရာရယ်…..
ဟင်း…လူသားတွေအကုန် (မည်သူမဆို)ဘုရားဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ တန်းတူတယ် ယူဆတာမို ့ပါ…။
– ဖတ်သူဘယ်နှစ်ဦး ရှိပြီလဲဆိုတာ မှတ်ချက်ပေးသူ အရေအတွက်တင်ထားပါပြီ။ တော့ပစ်ခေါင်းစဉ်စာတန်း အောက်နားလေး..ညာဖက်မှာရှိပါတယ်။
home page မှာတော့မရသေးပါဘူး။
– နောက်ဆုံးသတင်းစာ 2010 -July-August ဒေါင်းလိုက်ပါလားခင်ဗျ။
ရှေ့ကဟာတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တင်ပါ့မယ်။ အဲဒီဟာတွေက ဖိုင်ဆိုက်အရမ်းကြီးလို့ပါ။
– မန ္တလေးတျုလည်း ပြန်ကြည့်ပါမယ်။ အခုတော့ ကိုယ့်အလုပ်ထဲကနေ အားတဲ့အချိန်လေး ဝင်လုပ်ပေးနေတာမို ့ပါ။
အသစ်ပြင်လိုက်တဲ့ Template Design က ပိုကောင်းပြီး ပိုရှင်းတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုက်ဒ်က အရမ်းကို လေးလာတာ သတိထားမိတယ်။ ခါတိုင်းလည်း လေးတာမှန်ပေမဲ့ မနေ့ကစလို့ စိတ်မရှည်စရာ ကောင်းလောက်အောင် တော်တော် လေးလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းတော့ ကျနော်လည်း နားမလည်ပါဘူး။
ကျနော့် အင်တာနက် မြန်နှုန်းက — Download speed — 1600 kbps
Upload speed — 300 kbps လောက်ရှိပါတယ်။
ယခု ဆိုဒ်အသစ်ပြောင်းနေတုံးမှာ ပို့စ်အသစ်တွေကို တင်လို့မရသေးဘူးလားခင်ဗျာ..။ New Post ရှာတာ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ညာဖက်က Site Admin ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး ပို့စ် အသစ် တင်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား …..
အရင်က ဆိုက်ဒ်မှာ ကြည့်နေသူ ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာကို ပင်မစာမျက်နှာမှာ တွေ့ရတယ်၊ အခုမရတော့ဘူးနော်။ တခါတလေကြတော့ ကိုယ်တယောက်ထဲများ ဖြစ်နေမလား ဆိုပြီးတွေးတွေး ကြောက်မိလို့ပါ။ ကွန်ပြူတာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာရှိရင် ကွန်ပြူတာ သရဲဆိုတာလည်း ရှိနိုင်လို့ပါ။
– ပရိုက်ဗေစီကို ဦးစားပေးမယ်စဉ်းစားတာက တချက်..။ ( တချို ့အွန်လိုင်းမှာပေါ်နေတာ ကိုယ်ဖျောက်ချင်ကြတာကိုး)
– သိသိသာသာ လေးပင်သွားတာကတချက်( သာမန်အချိန် ၂-၃ယောက်လောက်ပေမဲ့..မြန်မာပြည်ကတက်ကြတဲ့အချိန်ဆို ၁၅+လောက်အထိဖြစ်တာမို ့ပါ)
မြန်မာip Address မဟုတ်ရင် မပေးဘူးဆိုတော့ တရုတ်နယ်စပ်ကလူတွေက တရုတ်လိုင်းဘဲ သုံးနေကျတာကောဘယ်လိုလဲ ….
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ပွိုင့်ပေးစံနစ်က မန်ဘာတွေကို ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့တည်ဆောက်ထားတာပါ။
တိုတိုပြောရရင်တော့…မန်ဘာတွေကို ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒီတော့…
ကျနော်၊ ကျမသည်..မြန်မာပြည်တွင်းမှာနေသူဖြစ်သည်..ဆိုပြီး ငွေလှမ်းတောင်းယုံပါပဲ..။
ကျွန်တော်တင်တဲ့ ပို့စ်အတွက် ပွိုင့်က ၁၀ဝ ပဲ ရတော့သလားပဲ…
ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး လူကြိုက်များလောက်တဲ့ ပို့စ်တွေ အတွက် ပွိုင့်တိုးပေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလား သိပါရစေ…
ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ လူတွေလည်း ကောင်းကောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ Catagory တခုကို ဖန်တီးပေးရင်ရော ပွိုင့်ဘယ်လိုပေးမလဲ သိပါရစေ…
ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတာတွေ ပွိုင့်ပိုပေးတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ချင်ပေမဲ့ ကျုပ်လည်း ပရိုဂရမ်မဆွဲတတ်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ပြန်မေးပါဦးမယ်။
လူတလုံးပိုစ့်တွေတချီု ့က ကိုယ်ပိုင်စာတွေဖြစ်ရင် သီးခြားကြည့်တိုးပေးပါမယ်။
တင်ထားတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို နေ့အလိုက် အကုန်လုံး ဖတ်လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
Side Admin ထဲမှာတော့ ကွန်မန့်အကုန် တန်းစီဖတ်လို့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှ စာပေစီစစ်ရေးက မသုံးတဲ့ အများပြည်သူလူထုအတွက် အဖြစ်မှန်သတင်းများကို ရေးဖို့နေရာတစ်ခု ရလာပါတယ်။ အထူးဝမ်းသာစရာပါဗျာ..။
ဝမ်းသာတာ နောက်ထား ဘယ်တော့ ဘန်းခံရမလဲ စိတ်ပူနေရမယ် သိပ်တော့ စည်းလွတ်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့။
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ၂၀၀၃ ကျောက်ဆည်အရေးအခင်းကို သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရ ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲ … ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ သတင်းကအမှန်ပါဆိုတာကို ဘယ်လိုထောက်ခံချက်တွေလိုသေးလား …. ဖြစ်လာမယ့် ပြသာနာဆိုတာက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ….. ဘယ်လိုတာဝန်ယူရမလဲ ပြောပြပေးပါ … ကျွန်တော်သတင်းဟာ အားလုံးသိမှဖြစ်မှာပါ … နောက်ဆက်လက်ရေးမယ့် စာဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလွန်းလို့ပါ …. တင်ဖြစ်အောင်ကို တင်ချင်ပါတယ် … ရင်ထဲမှာဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်လို့ပါ …
“လူမျိုးရေး။ အသားအရောင်၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ”
အဲဒီစည်းကမ်းအတိုင်းပါပဲ။ တကယ်လို့ အဲဒီစည်းကမ်းထဲက တခုနဲ့မှမငြိစွန်းနေပါဘူးလို့ စာမူတင်သူကိုယ်တိုင်…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရင် တင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကိုတော့ မလှည့်စားကြည့်ပါနဲ့။
ငယ်ငယ်ကဆို စာရေးရမှာ သိပ်ကြောက်တာဗျ..
ရည်းစားစာတို့ ကဗျာတို စာတိုတွေပေါ့..
အဲဒါတွေက ကျနော့ရဲ့ စာဖွဲ့မကုန်တဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေပေါ့ဗျာ
အဲ…အခု အသက်(၃၀) ကျော်သွားတော့
နယ်မှာနေတဲ့ မိဘဆီကိုတောင် သာကြောင်းမာကြောင်းစာရေးရမှာကို
ဒါပေမဲ့ မန်ဘာတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ရေးနေရအုံးမှာပဲ..
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ကျောက်ဆည်မြို့ဆင်အကနှင့်ရွှေသာလျောင်းတောင် ဆိုတဲ့ပို့က တင်ထားတာကို ဘာလို့မတက်တာလဲ … ပြောပြပေးပါ …
ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာမှာ ဖော်ပြကြောင်း ဘယ်လိုသိရှိနိုင်ပါလဲ
ဖေါ်ပြရင်ဖေါ်ပြကြောင်း ပြောမှာပေါ့ဗျာ။ ဒုက်ခပါလား။
အဲဒီသတင်းစာက စောင်ရေ ၁သောင်း၂ထောင်ပုံနှိပ်ထုတ်နေတာ..။ လူသိန်းနဲ့ချီဖတ်နေတာ..။ ယူအက်စ်မှာနေတဲ့သူလှမ်းမေးလဲသိနိုင်တာပဲနော…။
ုkai ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ … တက်နေတယ်ဆိုရင် ပွိုင့်တက်ရမှာပေါ့ .. ပွိုင့်လည်းမတက်ဘူး….စာလည်းမတွေ့ရဘူး ….
ပြောင်းလိုက်တဲ့ site format က ကောင်းပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ site format အဟောင်းကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တာတုန်း
မြန်မာပြည်တွင်းက မန်ဘာတော်တော်များများ ဝင်မရဘူး(ဝင်ရအရမ်းခက်တယ်)ပြောနေကြလို့ပါ။
အသစ်က ဆာဗာကို ၂ဆလောက် ပိုလေးသွားတယ်လို့ ဆာဗာ(ဟို့စတင်း)ကလည်းပြောပါတယ်။
site အသစ်ကနေ ပိုစ် တင်တာ ၂ရက် ရှိပါပြီ မရပါ ။ ဆိုင်ပြောင်းပြီး mandalay gazette ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ site ပုံစံ အဟောင်းဖြစ်နေ ပြန်ပါတယ်။
အဟောင်း ကလဲ အခုထိတော့ တင်လို့မရသေးပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျား …